Zimbabwe bowler Tinashe Panyangara throws the ball during the third day of a test match between South Africa and hosts Zimbabwe at the Harare Sports Club on August 11, 2014 (AFP Photo/Jekesai Njikizana)
Harare (AFP) - Seamer Tinashe Panyangara has been removed from the Zimbabwe squad for the remainder of the triangular series for sharing an intimidating video of Australia fast bowler Mitchell Johnson with his teammates.
A Zimbabwe Cricket media release confirmed on Wednesday that Panyangara had been “expelled” from the Zimbabwe camp because of “indiscipline”, but gave no further details.
“The 28-year-old Panyangara has also been fined one match fee for his behaviour that the national team disciplinary committee found to be disruptive in the build-up to the first ODI of the triangular series, which Zimbabwe played against Australia on Monday,” the statement read.
It has subsequently been established that Panyangara was disciplined because on Sunday he sent his teammates a highlights package of Johnson from the Ashes series in Australia from Cricket Australia’s YouTube channel.
Although the message was intended as a joke to Zimbabwe’s batsmen, their coach Stephen Mangongo and chief selector Givemore Makoni failed to see the funny side.
Zimbabwe’s next game is against South Africa on Friday.